ဒီရာသီ ပွဲဦးထွက်ဖလားဖြစ်တဲ့ ဥရောပစူပါဖလားကို ဘယ်အသင်းဆွတ်ခူးသွားမလဲ
15 Aug 2018 . 1:39 PM
ဥရောပစူပါဖလား – ရီးယဲလ် နှင့် အက်သလက်တီကို (ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၁း၃၀)
၂၀၁၈ ဥရောပစူပါဖလားပွဲကတော့ ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)နှစ်ဆက်ရယူခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကိုအသင်းတို့ရဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲကို ပရိသတ်တွေ ရှုစားရမှာပါ။ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲဖြစ်တာနဲ့အညီ ပွဲက အကြိတ်အနယ်ရှိမှာ အသေအချာဖြစ်ပြီး နည်းပြသစ် လိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui လက်ထက်မှာ ရီးယဲလ်အသင်း ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ နောက်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့ ရီးယဲလ်တိုက်စစ်ပိုင်းက အားနည်းသွားမလား၊ လူငယ်သွေးသစ်တွေနဲ့ ပိုကောင်းလာမလားဆိုတာကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ် . . . . .
ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဗယ်လေဟို Vallejo ၊ အိုဒရီအိုဇိုလာ Odriozola တို့ကို ဒီပွဲအတွက် လူစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားပေမယ့် ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ပါဝင်နိုင်ဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ တုန်းက ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ် Lucas Hernández လည်း ဒီပွဲကို လွဲချော်ဖို့များပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂိုးသမားသစ် ကော်တိုအာ Courtois ကိုလည်း ရီးယဲလ်အသင်းက ဒီပွဲအတွက် UEFA ဆီ စာရင်းမသွင်းရသေးတာကြောင့် ပါဝင်ဖို့ မသေချာဖြစ်နေတယ်။
ရီးယဲလ်နဲ့ အက်သလက်တီကိုအသင်းတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ (၂၁၉)ကြိမ် ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်အသင်းက (၁၁၀)ပွဲနိုင်၊ အက်သလက်တီကိုက (၅၅)ပွဲနိုင်၊ (၅၄)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဥရောပစူပါဖလားကို နောက်ဆုံး(၂)နှစ်ဆက်တိုက်ရယူခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း(၄)ကြိမ် (၂၀၀၂, ၂၀၁၄, ၂၀၁၆, ၂၀၁၇)ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွေမှာတော့ ဒုတိယနေရာသာ ရရှိခဲ့တယ်။ အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ဥရောပစူပါဖလား မှတ်တမ်းက အားရစရာပါပဲ။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲနှစ်ကြိမ် ကစားတာမှာ နှစ်ကြိမ်စလုံး အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်နဲ့ အဲဒီမတိုင်ခင် နှစ်တွေမှာ အက်သလက်တီကိုအသင်းဆိုတာက ရီးယဲလ်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် အက်သလက်တီကိုအသင်းကို ဆီမြွန်နီ Simeone ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စလို့ ရီးယဲလ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး(၁၇)ပွဲကို ပြန်ကြည့်ရင် အက်သလက်တီကိုက (၆)ပွဲနိုင်၊ (၇)ပွဲသရေ၊ ရီးယဲလ်က (၄)ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့တာကို တွေ့ရမယ်။
လက်ရှိလူစာရင်းကို ကြည့်ရင်လည်း အက်သလက်တီကိုရဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုက အားရစရာကောင်းပြီး ဒီယေဂိုကော်စတာ Diego Costa ၊ ကာလီနစ် Kalinić ၊ ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann တို့ရဲ့ တိုက်စစ်စုဖွဲ့မှုက ရီးယဲလ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့ပေမယ့်လည်း ဂါရတ်ဘေးလ် Bale ၊ ဘန်ဇီမာ Benzema တို့အပြင် ဘရာဇီးလ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဗီနီစီယက်စ် Vinícius လည်း ရှိနေလို့ အရင်လို မာကျောနေဆဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းက ကြီးကြီးမားမား ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူထားမျိုး မရှိဘဲ လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့သာ ရာသီသစ်ကို စတင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ နည်းပြသစ် လိုပယ်တက်ဂီရဲ့ လက်ထက်မှာ ရီးယဲလ် အရင်လို တည်ငြိမ်မှုရှိနိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။ အသွင်သစ်လိုဖြစ်နေတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းထက် Team Work ပိုကောင်းတဲ့ အက်သလက်တီကိုကို ပိုကြိုက်မိတယ်။ အကြိတ်အနယ်ကစားပြီးမှ အက်သလက်တီကို (၂-၁)ဂိုးလောက်နဲ့ နိုင်ဖို့များတယ်။
Ajax – 2
Photo:DeviantArt,Evening Standard,The Telegraph,Sports Illustrated
ဒီရာသီ ပှဲဦးထှကျဖလားဖွဈတဲ့ ဥရောပစူပါဖလားကို ဘယျအသငျးဆှတျခူးသှားမလဲ
ဥရောပစူပါဖလား – ရီးယဲလျ နှငျ့ အကျသလကျတီကို (ကွာသပတေးနေ့ နံနကျ ၁း၃၀)
၂၀၁၈ ဥရောပစူပါဖလားပှဲကတော့ ပရိသတျတှရှေေ့ ပွနျလညျရောကျရှိလာပါပွီ။ ဒီနှဈမှာတော့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)နှဈဆကျရယူခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ယူရိုပါလိဂျခနျြပီယံ အကျသလကျတီကိုအသငျးတို့ရဲ့ မကျဒရဈဒါဘီပှဲကို ပရိသတျတှေ ရှုစားရမှာပါ။ မကျဒရဈဒါဘီပှဲဖွဈတာနဲ့အညီ ပှဲက အကွိတျအနယျရှိမှာ အသအေခြာဖွဈပွီး နညျးပွသဈ လိုပယျတကျဂီ Lopetegui လကျထကျမှာ ရီးယဲလျအသငျး ဘာတှေ ပွောငျးလဲသှားမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ နောကျပွီး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့ ရီးယဲလျတိုကျစဈပိုငျးက အားနညျးသှားမလား၊ လူငယျသှေးသဈတှနေဲ့ ပိုကောငျးလာမလားဆိုတာကိုလညျး စောငျ့ကွညျ့ရမယျ . . . . .
ရီးယဲလျအသငျးမှာ ဗယျလဟေို Vallejo ၊ အိုဒရီအိုဇိုလာ Odriozola တို့ကို ဒီပှဲအတှကျ လူစာရငျးမှာ ထညျ့သှငျးထားပမေယျ့ ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ ပါဝငျနိုငျဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ တုနျးက ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ နောကျခံလူ လူးကပျဈဟာနနျဒကျဇျ Lucas Hernández လညျး ဒီပှဲကို လှဲခြျောဖို့မြားပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂိုးသမားသဈ ကျောတိုအာ Courtois ကိုလညျး ရီးယဲလျအသငျးက ဒီပှဲအတှကျ UEFA ဆီ စာရငျးမသှငျးရသေးတာကွောငျ့ ပါဝငျဖို့ မသခြောဖွဈနတေယျ။
ရီးယဲလျနဲ့ အကျသလကျတီကိုအသငျးတို့ဟာ ပွိုငျပှဲစုံမှာ (၂၁၉)ကွိမျ ဆုံတှခေဲ့ပွီး ရီးယဲလျအသငျးက (၁၁၀)ပှဲနိုငျ၊ အကျသလကျတီကိုက (၅၅)ပှဲနိုငျ၊ (၅၄)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဥရောပစူပါဖလားကို နောကျဆုံး(၂)နှဈဆကျတိုကျရယူခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျမှာဆိုရငျတော့ စုစုပေါငျး(၄)ကွိမျ (၂၀၀၂, ၂၀၁၄, ၂၀၁၆, ၂၀၁၇)ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀ ခုနှဈတှမှောတော့ ဒုတိယနရောသာ ရရှိခဲ့တယျ။ အကျသလကျတီကိုအသငျးရဲ့ ဥရောပစူပါဖလား မှတျတမျးက အားရစရာပါပဲ။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ပွိုငျပှဲနှဈကွိမျ ကစားတာမှာ နှဈကွိမျစလုံး အနိုငျရခဲ့တယျ။ ၂၀၀၀ ခုနှဈကြျောနဲ့ အဲဒီမတိုငျခငျ နှဈတှမှော အကျသလကျတီကိုအသငျးဆိုတာက ရီးယဲလျရဲ့ ပွိုငျဘကျမဟုတျခဲ့ပမေယျ့ အကျသလကျတီကိုအသငျးကို ဆီမွှနျနီ Simeone ရောကျရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှဈက စလို့ ရီးယဲလျကို ဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့အသငျးထဲမှာ ပါဝငျလာခဲ့တယျ။ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး(၁၇)ပှဲကို ပွနျကွညျ့ရငျ အကျသလကျတီကိုက (၆)ပှဲနိုငျ၊ (၇)ပှဲသရေ၊ ရီးယဲလျက (၄)ပှဲသာ အနိုငျရခဲ့တာကို တှရေ့မယျ။
လကျရှိလူစာရငျးကို ကွညျ့ရငျလညျး အကျသလကျတီကိုရဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုက အားရစရာကောငျးပွီး ဒီယဂေိုကျောစတာ Diego Costa ၊ ကာလီနဈ Kalinić ၊ ဂရဈဇျမနျး Griezmann တို့ရဲ့ တိုကျစဈစုဖှဲ့မှုက ရီးယဲလျကို ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျးရှိတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးမှာ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့ပမေယျ့လညျး ဂါရတျဘေးလျ Bale ၊ ဘနျဇီမာ Benzema တို့အပွငျ ဘရာဇီးလျလူငယျကွယျပှငျ့ ဗီနီစီယကျဈ Vinícius လညျး ရှိနလေို့ အရငျလို မာကြောနဆေဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီရာသီမှာ ရီးယဲလျအသငျးက ကွီးကွီးမားမား ကစားသမားသဈ ချေါယူထားမြိုး မရှိဘဲ လူငယျကစားသမားတှနေဲ့သာ ရာသီသဈကို စတငျမယျ့အနအေထားဖွဈနတေယျ။ နညျးပွသဈ လိုပယျတကျဂီရဲ့ လကျထကျမှာ ရီးယဲလျ အရငျလို တညျငွိမျမှုရှိနိုငျမလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပဲ။ အသှငျသဈလိုဖွဈနတေဲ့ ရီးယဲလျအသငျးထကျ Team Work ပိုကောငျးတဲ့ အကျသလကျတီကိုကို ပိုကွိုကျမိတယျ။ အကွိတျအနယျကစားပွီးမှ အကျသလကျတီကို (၂-၁)ဂိုးလောကျနဲ့ နိုငျဖို့မြားတယျ။